Ọgbọ ọhụụ nke LibreOffice chọrọ ịdọta ọtụtụ ndị na-eto eto na LibreOffice na Open Source Community | Site na Linux
Ọha ọhụụ LibreOffice na-achọ ịdọta ọtụtụ ndị na-eto eto na LibreOffice na obodo mepere emepe
The Document Foundation (otu ulo oru na-abaghi ​​uru na-akwalite ngwanrọ nhazi akwukwo ederede, n'etiti ndi ozo) mere ka a mara ya naikpeazụ Fraide ochicho gi ime ka obodo gi bawanye site na igbalite mmemme ohuru Ọgbọ Ọhụrụ LibreOffice, nke kwesiri ime ka ị nwekwuo mmasị n’ebe ndị mmadụ nọ, karịchaa ndị na-eto eto.
Ọgbọ ọhụrụ LibreOffice en oru ngo iji na-adọta ndị ọhụrụ, na karịsịa ndị na-eto eto, nye ndị LibreOffice. Ntọala ahụ kwupụtara na ọ bụ ezie na ọ na-enwe obi ụtọ banyere ụdị dị iche iche nke obodo ya ugbu a na ọnụnọ nke ndị ọgbọ niile, ọ kwenyere na ndị na-eto eto na-enyere aka weta echiche ọhụrụ na ịbịaru ọrụ ahụ.
Ọgbọ ọhụrụ LibreOffice: gịnị bụ ọ?
“Taa, anyị na-ekwuputa ọrụ ọhụụ: LibreOffice New Generation. Ọ bụghị maka sọftụwia ahụ, ọ bụ maka ndị nọ n’azụ ya. Dịka o nwere ike ịbụ na ị maara, LibreOffice bụ obodo zuru ụwa ọnụ nke ndị mmepe na ndị ọrụ afọ ofufo enyere aka, ndị na-arụ ọrụ na koodu isi, nsụgharị, akwụkwọ, imewe, njikwa mma, ahịa, akụrụngwa, na ndị ọzọ. Anyị chọrọ ịbịakwute ọtụtụ mmadụ, "ntọala ahụ kwuru na blog blog na Friday.
Dị ka blog post, dị nnọọ onye ọ bụla nwere ike isonye ọrụ ahụAgbanyeghị, achọrọ ka ndị ntorobịa sonye ma gbaa ume.
Ntọala ahụ kwuru, "Maka nke a, anyị ga-achọ ka onye ọ bụla nyere anyị aka itinye ndị na-eto eto na-arụ ọrụ ahụ ma nyere ha aka itinye aka na otu anyị." Ya mere, The Document Foundation na-ekwuwapụta na ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ ma ọ bụ nwa akwụkwọ sekọndrị na-eji LibreOffice, ọ ga-achọ ịnụ n'ọnụ gị ma ọ bụ, karịa, azịza gị nye ọtụtụ ajụjụ ọ nwere. Kedu ihe ị ji eji LibreOffice? Olee otú ị pụrụ isi meziwanye ya?
Banyere ọrụ a ga-arụ, Akwụkwọ Document kwuru na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-enye aka na ngwanrọ n'efu na ọrụ mmeghe ọ na-amasị ha ịnweta ihe na-egosi ọrụ ha.
Maka nke a, wepụtara baajị emeghe maka onyinye obodoNdị a bụ akara ngosi pụrụ iche na metadata n'ime, na-egosi ihe mmadụ mere. Ọ sịrị, "Ya mere, anyị ga-achọ ibido kesara ha ndị obere na ndị ọhụrụ nọ n'obodo ahụ."
Akwụkwọ Dọkụmentị kpọrọ ndị baajị ndị a Mepee baajị ọ ga-amasị m iji baajị ndị a kwụọ ụgwọ ọrụ ndị ntorobịa.
“Anyị nwere echiche na ọrụ ndị ọzọ, mana anyị ga-achọ ịnụ n'ọnụ gị! Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike inye gị? Kedu ka anyị ga - esi amata ma kwụghachi ndị ọrụ ụgwọ maka ọrụ ha? Ka anyị mara ihe ị chere… ”o kwukwara.
Etu esi debanye aha na Ọgbọ Ọhụrụ LibreOffice?
Maka ama ndi ozo banyere oru ngo a, ntọala na-akpọ ndị nwere mmasị ka ha sonyere n'ìgwè Telegram ya. N’ebe ahụ, ị ​​nwere ike iso ya kparịta ụka gbasara emeghe akara na echiche ndị ọzọ gbasara LibreOffice New Generation.
Mike Saunders kwubiri, "Anyị na-ele anya izute gị ma nụ echiche na ahụmịhe gị."
N'ikpeazụ, maka ndị ka na- amaghi banyere LibreOffice Ha kwesịrị ịma nke ahụ nke a bụ ụlọ ọrụ na-emeghe emeghe n'efu, sitere na oru OpenOffice.org, kere akwukwo akwukwo a.
Ọdịdị ya dị ọcha na ngwaọrụ ndị dị elu na-enye gị ohere igosipụta ihe okike gị ma mepụta nrụpụta gị. LibreOffice jikọtara ngwa dị iche iche: dee ngwanrọ nhazi okwu, gbakọọ mpempe akwụkwọ, na-adọrọ mmasị usoro ihe ngosi ahụ, see ihe osise na usoro ihe osise, dabere na nchekwa data na ntanetị data na mgbakọ na mwepụ na mgbakọ na mwepụ na nchịkọta akụkọ nke usoro mgbakọ na mwepụ.
Dị LibreOffice kachasị ọhụrụ, LibreOffice 7.0, wepụtara na August gara aga.ma ọ bụ. LibreOffice 7 webatara ọtụtụ mgbanwe na nkwalite dị ukwuu, gụnyere ndakọrịta nke ụlọ Microsoft.
Mmezi arụmọrụ sitere na Vulkan GPU dabere na osooso wuru na LibreOffice mgbe a kwagara koodu Cairo na ọbá akwụkwọ Google nke Skia. Maka ndị na-akwado mgbanwe dị mma, enwere ihu ọhụụ na akara ngosi Sukapura, nke bụ isiokwu ndabara maka ndị ọrụ macOS.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya banyere ozi ọma, ị nwere ike ịlele nkọwa na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Ọha ọhụụ LibreOffice na-achọ ịdọta ọtụtụ ndị na-eto eto na LibreOffice na obodo mepere emepe